2 YEZIGANEKO 4 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
2 YEZIGANEKO 42 YEZIGANE ... 4
(1 Kum 7:23-51)
41USolomon wenza iqonga lamadini lobheduMfud 27:1-2 liziimitha ezilithoba ububanzi nobude, liziimitha ezine ezinesiqingatha ukuphakama. 2Wenza nechibi elingqukuva ngobhedu. Laliziimitha ezilishumi elinesithathu nekota xa ulijikeleza. 3Phantsi komphetho lalijikelezwe yimifanekiso yeenkunzi zeenkomo. Ezo nkunzi zaziyimiqolo emibini, ziyinto enye nechibi elo.
4Eli chibi lalimi phezu kweenkunzi zeenkomo ezilishumi elinambini ezenziwe ngobhedu, ezintathu zikhangele ngasentla, ezintathu zijonge ngasentshona, ezintathu zikhangele ngasezantsi, zaza kananjalo ezintathu zajonga ngasempuma. Ichibi lalithe ngxishi phezu kwazo, izinqe zazo zijonge embindini walo. 5Ububanzi balo babulingana nesandla, umphetho walo ufana nowekomityi, kanye oku kwenyibiba edubulayo. Lwalungena iilitha ezingamawaka angamashumi amathandathu.
6Kananjalo wenza nezitya zokuhlambelaMfud 30:17-21 zalishumi, isihlanu sazo wasibeka kwicala langezantsi, esinye isihlanu wasibeka ngasentla. Apho kuzo kwakuza kuhlanjwa izinto zokwenza amadini atshiswayo; kodwa ke apho echibini kwakuza kuhlamba ababingeleli.
7Wenza neziphatho zezibane zegolideMfud 25:31-40 ezilishumi, ezenza ngokwemilinganiselo yazo; waza ke wazibeka apho endlwini kaThixo. Isihlanu sazo wasibeka kwicala langezantsi, waza esinye isihlanu wasibeka kwicala langasentla.
8Kwakhona wenza neetafileMfud 25:23-30 zalishumi, wazifaka apho endlwini kaThixo, ezintlanu ngasezantsi, ezintlanu ngasentla. Kananjalo wenza neendebe zegolide zokufefa zalikhulu.
9Waza ke wenza nenkundla yababingeleli, kunye nenkundla enkulu, neengcango zenkundla. Zona wazityabeka ngobhedu. 10Ichibi elo walibeka kumazantsi-mpuma endlu kaThixo.
11Kananjalo wenza iimbiza, iifotsholo, nezitya zokufefa.
Ngoko ke uHuram wawugqiba umsebezi awayewenzela ukumkani uSolomon endlwini kaThixo:
amatyathanga alukiweyo amabini ahombise ezo ntloko zimbini zezo ntsika;
13iirharnati ezimakhulu mane ziyimiqolo emibini ethe nca kwityathanga ngalinye elilukiweyo elihombise ezo ntloko zibusitya zeentsika ezo;
14izixhaso nezitya zazo;
15ichibi lobhedu lineenkunzi zeenkomo ezilishumi elinambini ezenziwe ngobhedu ezilixhasayo;
16iimbiza, iifotsholo, iifolokhwe zenyama, nezinye izixhobo ezikolo didi.
Zonke ke ezo zixhobo ezazenziwe nguHuram-abhi, ezenzela ukumkani uSolomon ukuze zisetyenziswe endlwini kaNdikhoyo, zazenziwe ngobhedu olugudisiweyo. 17Ezo zinto ukumkani wathi mazibunjwe ngezibumbi zomdongwe kwintili yeJordan phakathi kweSukoti neZaretan.Okanye “neZeredata” 18Ubunzima bazo xa zizonke ezi zinto wazenzayo uSolomon babubukhulu ngangokuba abuzange bube namlinganiso.
19Kananjalo uSolomon wazenza zonke iimpahla zendlu kaThixo:
iqonga lamadini legolide;
iitafile zesonka esinikelwa kuThixo;Mfud 25:30; Nqulo 24:5-8
20iziphatha-zibane ezazenziwe ngegolide ecikizekileyo kunye nezibane zazo, ezazimiselwe ukusoloko zivutha phambi kwendawo engcwele;
21iintyatyambo zegolide nezibane nezitya zokugcina imitya yezibane – zonke ziyigolide;
22izikhwezeli-zibane ezenziwe ngegolide;
neengcango zegolide zendlu leyo: nditsho iingcango ezingena kwigumbi eliyingcwele kangcwele, kunye neengcango zegumbi elingaphandle.